Tonizia: Nisafidy Ny Fitantanana Misokatra Amin’ny Alalan’ny Fampielezam-baovao Sosialy Ireo Mpanao Politika sy Solombavambahoaka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Febroary 2012 1:25 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Português, Español, Ελληνικά, English
Ity lahatsoratra ity dia ampahany amin'ny tatitray manokana momna ny Revolisiona Toniziana 2011.
Ny fanonganana ny fitondràn'i Ben Ali tamin'ny volana Janoary lasa teo dia nanokatra làlana nampitombo ny fampiasana fampitàm-baovao sosialy any Tonizia. Ankehitriny ireo mpanao politika dia mampiasa ireo fitaovana enjehin'ny fanjakàna ireo, mba hampitàna ny hafany amin'ny vahoaka.
Moncef Marzouki (@Moncef_Marzouki), filoha mpisolo toerana voafidy ho an'ny repoblika Toniziana, Khalil Zaouia (@KhelilEzzaouia), minisitry ny raharaha sosialy amin'izao fotoana, ary ireo solombavambahoaka hafa avy amin'ny antenimiera mpanorina, tahaka an'i @LobnaJribi sy @IyedDahmani dia nisoratra tamin'ny Twitter daholo tao ho ato.
Antony maro no mety ampiasàn'ny mpanao politika ny Twitter sy fampitam-baovao sosialy hafa, anisan'izany ny ffampizaràna fiarahabàna ny vahoaka Toniziana amin'ny fialàn-tsasatra ara-pivavahana, araka ny asehon'ny solombavambahoaka Dahmani [ar]:
@iyeddahmani: Arahabaina nahatratra ny Mouled (tsingerintaona nahaterahan'ny mpaminany Muhammed) isika rehetra. Hotahiana anie ianareo rehetra.
Twitter koa dia toerana hizaran'ireo mpanao politika Toniziana ny ahiahiny amin'ny fikorontanan'ny antoko misy azy na ny fahelan'ny fiasan'ny governemanta ankehitriny.
Mabrouka Mbarek, solombavambahoaka voafidy avy amin'ny antoko CPR dia nizara ny fahadisoam-panantenany tamin'ny fifidianan'ny antokony solombavambahoaka Silamo iray hafa hitondra ny kaomity mamolavola ny lalàm-panorenana vaovao. Bitsika mahatahotra tahaka izao no naverin'ny Toniziana sasany mpampiasa Twitter navoaka imbetsaka, izay mitovy ahiahy aminy [fr]:
@MabMbarek: Indraindray aho manontany tena #JeudiConfession “@MoniaBH: Fa misy inona ao amin'ny CPR?”
Iyed Dahmani, solombavambahoaka sady mpikambana ao amin'ny Ankoto Demokratika Progresista, mpanohitra, dia mampiasa Twitter hitsikerana ny asan'ny governemanta. Indraindray dia mampiasa ny tenim-paritra Arabo Toniziana izy mba hanintonana Toniziana bebe kokoa [ar]:
@iyeddahmani: Lasa mpifanandrina amin'ny vitsy an'isa ny governemanta. Tsy ny asany no ataony fa ilaozany mandany fotoana mitsikera ny mpanohitra dia avy eo mangataka fotoana (amin'ny mpanohitra) mba hanaovana ny asany, tahaka ny hoe nofatorantsika ireny ery ny tanan-dry zareo.
Ireo mpanao politika hafa dia mampiasa Twitter mba handraketana ny fisehoana amin'ny haino aman-jery any an-toerana sy maneran-tany.
Ary hatramin'ny naha-filoha azy, Marzouki dia mampiasa ny kaontiny Twitter manokana mba hizaràna ny laminasany amin'ireo mpampiasa Twitter. Mizara failo tahaka ny sary sy lahatsary ihany koa izy.
Nitàna anjara asa lehibe ireo mpampiasa aterineto tamin'ny fitarihana ny mpanao politika amin'ny fampitam-baovao sosialy. Ohatra amin'izany, ny 7ell dia fampitam-baovao sosialy sy fanentanan'ny olon-tsotra izay nanomboka tamin'ny taon-dasa, mba hitarihana ny mpanao politika sy ireo antoko politika hizara vaovao bebe kokoa amin'ny olom-pirenena. Manana pejy Facebook ny 7ell ary manana mpankafy maherin'ny 8000 sy lahatsoratra am-polony maro mba hampiroboroboana ny fintantanana misokatra amin'ireo Toniziana mpampiasa Facebook. Voalazalaza toy izao izany tetikasa izany [ar]:
هي هبادرة مدنيّة تبنّاوها بعض الأعضاء من المجلس الوطني التأسيسي المبادرة هاذي تحبّ تكرّس مبدأ الشّفافيّة في الدّستور التّونسي و تدخل آليات الحوكمة المفتوحة في إصلاح الإدارة. نطمحو إنّو الصّحافة و المواطنين التّوانسة ينجّمو يتبّعو عمل اللّجان في المجلس الوطني التّأسيسي و يتفاعلو معاه بطريقة مباشرة كيفما تفاعلو مع الثورة ولاّ الأحداث إلّي صارت في تونس عام 2011. من أهدافنا زادة نشر محاضر و تقارير اللّجان للنّاس الكلّ. التّونسي اليوم عندو الحقّ باش يعرف كيفاش النوّاب إلّي إنتخبهم قاعدين يكتبولو في دستورو و في مستقبلو و منظيّعوش حقّنا باش نبنيو تونس على قاعدة صحيحة
OpenGov dia tetikasan'ny olom-pirenena nampiasain'ny mpikambana sasany ao amin'ny antenimiera mpanorina. Izany tetikasa izany dia momba ny fangaraharàna amin'ny famolavolana ny lalàm-panorenana vaovao sy ny fametrahana ny rapi-pitantanana misokatra, vaovao, mba hanatsaharana ny kolikoly. Maniry izahay ny mba hanaraka ny asan'ireo komisiona isan-karazany ireo Toniziana manampahaizana amin'ny fampielezam-baovao sy ireo olom-pirenena, ary hihetsika avy hatrany manoloana azy ireo tahaka ny tamin'ny revolisiona sy ireo hetsika izay nitranga tamin'ny taona 2011. Ny tanjonay dia ny hanao ireo tatitra sy drafitra navoakan'ny kaomity ho azon'ny rehetra jerena. Ny toniziana ankehitriny dia manan-jo hahafantatra ny fomba hamolavolan'ireo mpikamban'ny parlemanta voafidim-baohaka ny lalàm-panorenana vaovao. Manana anjara fitenenana amin'ny hoaviny izy ary manan-jo hahita an'i Tonizia harenina amin'ny fototra marina tsara.
OpenGov koa dia tenifototra nampiasaina matetika nandritra ny fivorian'ny antenimiera mpanorina. Ankehitriny, solombavambahoaka 217 be izao no mampiasa Twitter mba hizaràna amin'ny vahoaka ny resadresaka atao ao amin'ny fivorian'ny antenimiera.
Azonao atao ihany koa ny manaraka ireo bitsika alefan'ny OpenGov Tunisia amin'ny @OpenGovTN.
Telo volana teo ho eo taorian'ny nanombohana ny fampielezan-kevitra 7ell, nanokatra kaonty vaovao tamin'ny fampielezam-baovao sosialy koa ny Fitondràna Toniziana, mba hifandraisana amin'ireo Toniziana mpampiasa aterineto sy hahazo ny hevitr'izy ireo momba ny asan'ny fitondràna sy ny filoha, Moncef Mazouki.
Ny zavatra navoakan-dry zareo voalohany dia ny sary manontany ireo Toniziana ny heviny momba ny fomba fiasan'i Marzouki, iray volana taorian'ny nifidianana azy.
Ny pejin'ny Fitondràna Toniziana ao amin'ny Facebook dia feno sarin'i filoha Marzouki mba hampahafantarana ireo Toniziana momba ny fitsidihany, fivoriana ary fivahinianana mankany ivelany. Fomba mivantana koa izany hizaràna ireo lahatsoratra an-gazety. Ny lahatsoratra farany indrindra dia lahatsoratra an-gazety iray momba ny famonoana ny Homs tany Siria tamin'ny alin'ny 4 Febroary. Nahazo fifampizaràna 646 izany lahatsoratra izany tao amin'ny Facebook, fankafizana 674 ary fanehoan-kevitra miisa 1 726 tanaty ora vitsy monja taoriany.
Namorona kaonty tao amin'ny Twitter sy Youtube ihany koa ny fitondràna Toniziana. Ny fantsona Youtube dia natao handefasana mivantana ireo solotena ofisialin'ny governemanta na tsy miankina amin'ny fanjakana izay mihaona amin'ny Marzouki ao amin'ny lapam-panjakàna any Carthage.
Lasa tia mifandray amim-pangaraharana bebe kokoa amin'ireo mpifidy azy ireo mpanao politika any Tonizia. Ankehitriny aloha dia toa ny fampielezam-baovao sosialy no vahaolana.